Ukuxhaswa Kwevidiyo ku-imeyili Kuyakhula - Futhi Kuyasebenza | Martech Zone
Ukusekelwa kwevidiyo ku-imeyili kuyakhula - futhi kuyasebenza
NgoLwesine, ngo-Okthoba 24, 2013 NgoLwesine, ngo-Okthoba 24, 2013 Douglas Karr
Ngocwaningo olunzulu olunzulu, amaMonks aphinde abuye nenye infographic ethokozisayo I-imeyili Yevidiyo . Le infographic inikeza izibalo ezibalulekile zokuthi kungani ukusebenzisa ividiyo nge-imeyili kubalulekile, izindlela ezinhle zokufaka ividiyo ku-imeyili nezinye izinganekwane ezihlobene nokusebenzisa ividiyo nge-imeyili.
Le infographic izokuhambisa ngokubaluleka kokusebenzisa ividiyo nge-imeyili, izinhlobo ezahlukahlukene ze-imeyili yevidiyo, izinganekwane ezihambisana nokusebenzisa ividiyo kwi-imeyili njll. Thumela i-imeyili ku-Acid kanye nokuhlolwa kwedatha yama-Monks nge-imeyili, okungenani U-58% wabo bonke abasebenzisi uzokwazi ukubona ividiyo nge-imeyili. U-42% wabo bonke abasebenzisi bazobe bebona nje isithombe sokubuyela emuva esikhundleni sevidiyo. Ama-55% wabakhangisi manje kungenzeka basebenzise ividiyo nge-imeyili. I-Infographic izophinda iphakamise ezinye zezimboni izindlela ezinhle kakhulu zokufaka ividiyo ku-imeyili.
Tags: i-imeyili infographicimeyili marketing infographicizindela ze-imeyiliimeyili ku-asidiividiyo ye-imeyilii-imeyili yevidiyoividiyo nge-imeyiliukwesekwa kwevidiyo
Awudingi Isiqu Sebhizinisi Ukuqonda Lokhu